Dagaal ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab ku dhex maray duleedka degmada Jalalaqsi – STAR FM SOMALIA
Wararka ka imaanaya degmada Jalalaqsi ayaa sheegaya in dagaalo u dhaxeeyay ciidamada dowladda oo wehliya ciidanka AMISOM iyo Al-Shabaab ku dagaalameen deegaan lagu magacaabo Ceel-qoryaale.
Wararka ayaa sheegaya in dagaalka uu ka dhacay xadka labada Gobol ee Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan, markii ciidanka dowladda ay ku baxeen deegaan ay ku sugnaayeen Al-Shabaab oo la sheegay inay ka wadeen howlo zako uruurin ah.
Guddoomiyaha degmada Jalalaqsi Maxamed C/lle Fiidow ayaa sheegay in howl gal ciidanka dowladda iyo AMISOM ka sameeyeen deegaanka Ceel-qoryaale ay khasaare ku gaarsiiyeen Al-Shabaab.
Labada dhinac ayaa la sheegay inuu soo kala gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, inkastoo aan si dhab ah loo ogeyn, hase ahaatee dadka deegaanka ay xaqiijinaya in ku dhowaad shan ruux oo dhinacyada dagaalamay ahaa ay dhinteen.
Dadka deegaanka ayaa sheegaya in xiisad ay ka jirto deegaanka, lagana cabsi qabo in dagaalo kale ka dhacaan.
Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay Al-Shabaab oo ku aadan dagaalkan, waxaana deegaanka lagu dagaalamay ku sugan ciidamada dowladda iyo AMISOM.